Usoro Paireti: Nchịkọta Ọrụ Maka Ndenye aha | Martech Zone
Anyị na-ebi n'oge ebe ọ na-adị mfe ma dịkwa mfe ịmepụta azịza nke gị. Otutu n’ime ngwa ọdịnala dị na ịntanetị wuru n’oge dị iche - ebe SEO, ịre ahịa ọdịnaya, mgbasa ozi mmekọrịta, ajax, wdg. Mana anyị ka na-eji ngwaọrụ ndị ahụ, na-ahapụ nleta, nyocha ihu, bounces na mpụga igwe ojii ikpe anyị n'amaghị ma ha na-emetụta ala. Metrics metụta ihe kachasị dị adịghịdị ma na-achọ mgbakwunye mmepe na mwekota.
Paireti Metrics -enyere gị aka ime quantitative na comparative analysis nke azụmahịa gị site na nsuso 5 isi metrik (AARRR):
nnweta - acqu nweta onye ọrụ. Maka ngwaahịa SaaS, nke a na-apụtakarị ihe ịrịba ama.
Tinye n'ọrụ - Onye ọrụ ahụ na-eji ngwaahịa gị, na-egosi ezigbo nleta mbụ.
Njide - Onye ọrụ ahụ na-aga n’ihu iji ngwaahịa gị, na-egosi na ngwaahịa ha masịrị ha.
Ntuziaka - Onye ọrụ ahụ nwere mmasị na ngwaahịa gị nke ukwuu ọ na-ezo aka na ndị ọrụ ọhụụ ọhụrụ.
Ego - Onye ọrụ na-akwụ gị ụgwọ.
Paireti Metrics na-adabere na Mbido Metrics maka Pirates okwu site Dave McClure, ma ndị mmepe achọghị naanị iji ngwá ọrụ nyocha nke ga-agbaso mgbe ihe ndị na-akpali mmasị mere. Ha mere Metric Pirate iji nyere aka dozie nsogbu ọzọ, nke bụ ire ngwa weebụ.
Paireti Metrics nakọtara ọnụọgụ ọnụọgụ ise dị iche iche n'ime izu otu izu, wee jiri izu ahụ tụnyere ọnụ ọgụgụ na-agagharị agagharị. Site na ịdekọ ihe omume ahịa emere n'ime otu izu (na-agba ọsọ mgbasa ozi, A / B na-anwale usoro ọnụahịa gị, wdg) ị nwere ike ịkọwa ngwa ngwa nke mmemme gị AARRR ọnụego.
Paireti Metrics na - eweputa akuko ahia nke ana - emelite. Na akụkọ ire ahịa, ha na-achọ ụkpụrụ n'omume ndị ọrụ gị, wee nyekwa ndụmọdụ maka ụzọ iji melite nọmba AARRR gị.
Nkwupụta ahịa ahụ na-abanye ntakịrị n'ime ọnụ ọgụgụ AARRR gị, ma na-enye ndụmọdụ maka ụzọ iji meziwanye nọmba ndị a. Iji maa atụ, Pirate Metrics na-achọpụta ndị ọrụ na-emebeghị isi ọrụ gị kemgbe ha mechara kwụọ ụgwọ maka ọrụ gị, yabụ ị nwere ike ịkpọtụrụ ha iji chọpụta ma ọ bụrụ na ha enwee nsogbu tupu ha akagbuo na enweghị ịdọ aka ná ntị. Ikpo okwu a na-egosikwa ma ndị ọrụ na-arụ ọrụ nwayọ nwayọ ma ọ bụ karịa ngwa ngwa karịa ọnụ ọgụgụ na-agagharị agagharị bara uru karịa ego, yabụ ị nwere ike ịme mkpebi akọwapụtara nke otu ị ga-elekwasị anya na mbọ ahịa gị.
Enweghi ngwaahịa ọ bụla emere kpọmkwem iji soro ihe omume SaaS, nyochaa data ahụ, wee nye azịza ga-enyere azụmahịa ahụ aka inweta ego. Paireti Metrics awade a 1 ọnwa ikpe na-amalite mgbe a ọhụrụ ọrụ na-amalite na-ezitere anyị data, na tiered ịnye ọnụahịa Ọdịdị na-amalite na $ 29.00 kwa ọnwa.
Tags: onyiomannwetanchịkọta arụmọrụbonoboAnalyticsdave mccluremetrik pairetiNtuziakanjigide